/Blog/garari/Oxymetholone kuongororwa: The Ultimate Guide yeOxymetholone (Anadrol)
Posted on 01 / 08 / 2019 by Dr. Patrick Young akanyora garari.
Hazvishamisi kuti kuvaka muviri ndeimwe yezvinhu zvakaoma zvikuru izvo munhu angazvibatanidza nazvo. Zvisinei, kana yakaitwa zvakanaka nemiti yakakodzera, kurovedza, uye kudya, inopa imwe muzvikamu zviviri. Muzvokwadi, kusimudza zviyevedzi uye kurovedza ndoga zvingasaita kuti iwe uve nemigumisiro yakanaka iyo vakawanda vanowanzofunga. Oxymetholone (Anadrol) ndechimwe chezvinhu zvaungashandisa kushandura rwendo rwako rwekuvaka muviri kuti ruve ruzivo runogutsa muupenyu hwako.
Chimwe chinhu ndechokuti iwe paunenge wava nemakore, kubudisa mahomoni emuviri seTesttosterone kunoderera uye iwe unongosiyiwa nechisarudzo chinoenderana nekugadzirwa kwaro .Anadrol inoshanda seTesttosterone mumuviri uye mikana ndeyokuti ichaunza mamwe mafaro kupfuura yekupedzisira. Hakusi kungoita kuti iwe uone kufambira mberi mumuviri wako asi kunyange kunyanya kukosha kuchaita kuti iwe usakure chero mapepa epanyama angave akakunetsa iwe murwendo urwu.
Kana iwe uchifunga kurarama hupenyu hunofadza hwekuvaka muviri, saka iwe unofanira kutora Anadrol nokuti ichakubatsira zvikuru kukuwedzera musimba yako uye simba. Panguva ino unogona kuziva zvakawanda pamusoro peOxymetholone (Anadrol) (434-07-1). Iwe uchawana ruzivo rwese pamusoro paro muminiti.
Chii chinonzi Oxymetholone (Anadrol)?
Oxymetholone ndiro zita reAnadrol 50 iyo inozivikanwa kwazvo anabolic androgenic steroid. Kuzvibvunza iwe izvo "50" zvinorevei? Inoratidza mamiriyoni ayo steroid ino yakaiswa pairi. Heano mamwe emamwe mazita mazita eAnadrol;
Mune 1960 mamwe makambani emishonga akavaka Anadrol. Makambani aya anosanganisira Zoltan, Syntex, uye Park Davis. Munguva yakapfuura, yakashandiswa mukusimudzira kushandiswa kwemasero matsvuku eropa kune vanhu vairwara nehutachiona hwemeri. Yakanga ishandiswawo kuwedzera kudya, kufarira mukusimbisa mapfupa uye kurwisana nemisumbu kuparadza zvirwere. Chidzidzo chakaitwa mumazuva iwayo kuvarwere vaiva neAIDS kwemavhiki makumi matatu uye miviri yavo yaive kuburikidza nemisumbu yakashaya yakaratidza kuti steroid iyi yakavabatsira kuwana mavhareji maseregiramu masere kusvika pakuguma kwekudzidza.
Zvakanga zviri shure kweizvozvo vanhu vakaziva kuti inogona kushandiswa pakugadzira muviri. Vagadziri vakatanga kushandisa iyo kuti vabudirire hukuru hwemasimba. Nhasi Oxymetholone (Anadrol) (CAS 434-07-1) inonzi inofanana nemumwe wemasimba anonyanya kunyorera vanabolic steroid mumusika. Hazvishamisi kuti zvinogona kubatsira mumwe kuvaka masimba makuru kaviri nekukurumidza sezvimwe steroid inogona. Itsbolic yayo ye androgenic chiyero ndeye 350: 55. Chero mumiririri wezvivako uyo akashandisa zvinogona kupupurira kuti steroid iyi inowedzera uyerogenic kupfuura iyo iri mumifananidzo.
Chimwe chinhu chinoita kuti ive steroid yakawanda pakati pevanhu vazhinji ndeyekuti inogona kutorwa nomuromo. Iko nokuti iyo 17aa steroid inoreva kuti yakanyatsogadziriswa mu 17 yayoth atomu ikozvino inogona kutorwa nomuromo.
Oxymetholone inobatsira zvikuru vanabolic steroid iyo inoshanda ine simba kuti iyi mishonga inofungidzirwa kuva katatu yakasimba kudarika testosterone. Ndezvipi zvakare zvaungada zve steroid anabolic?
Oxymetholone (Anadrol) nzira yekuita
Oxymetholone inogadzira testosterone derivative ine yakakwirira yevanabolic kune androgenic basa. Inoshanda nekusunga ne cytoplasmic testosterone receptors mumatumbu uye nhengo dzinonzi androgen dzinopindura kuti dzigadzire zvakanyanya hormone-receptor. Hemoni-receptor complex then inosunga DNA saka ichisimudzira DNA kunyorwa uye mRNA yakagadzirisa iyo inoshandura kutanga kweprotini.
Uyezve, Oxymetholone inoshandisa anabolic effect pamasumbu emakumbo uye skeleton paanokurumidza kuwedzera erythropoiesis. Uyewo, ichi chirwere chinoshandisa chiito chemapurisa pamuviri nekurera mazinga eerythropoietin anobatsira kubereka masero matsvuku eropa. Inowedzerawo nitrogen muyero mumuviri uye kuburikidza nekusimudzirwa kwekuchengetwa kwemvura.
Chii chinonzi Oxymetholone chinoshandiswa mukugadzira muviri?
Oxymetholone ine zvakawanda zvekuvaka muviri kunobatsira izvo zvinounza patafura. Heano mamwe acho;
Iyo inosimudzira protein synthesis- Kukura kwemasumbu kunokonzerwa neprotheni sezvo ichi ndicho chivako chikuru muviri. Kana ukangoshanda kunze kune hutachiona hwepuroteni kuputsika kunoshandura musimba kukura. Nokuda kwehukuru hwemasumbu ako kuti uwedzere, muviri unofanirwa kuva neprotheni yakawanda kupfuura kuparara kwahwo, uye neOxymetholone kukurudzira proteine ​​synthesis, pane kusikwa kwemasimba makuru.
Inokurudzira kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa- Masero matsvuku eropa anovimbisa kuti mishonga yako yakanyatsokonzerwa neokisijeni saka izvi zvinoramba zvakaneta. Iwe unogona, saka, kukwanisa kuita zvidzidzo zviri nani kunze kwekutambura nekuneta zvakanyanya zvinoita kuti uve nemasimba akanaka. Muumbi wekugadzirisa anobatsirwa nekuwedzera kutsungirira nokuti iye anogona kukwanisa kudzidzisa zvakaoma muvhiki rose.
Anadrol inowedzera nitrogen kuchengetedza- Iyi steroid inogona kuwedzera huwandu hweitrogen iyo misumbu yako inogona kuchengeta. Kubudirira neizvi ndezvokuti mimwe michina inowanikwa mumasumbu ako ezvo inotungamirira kukura kwavo uye zviri nani kupora mushure mokushanda kunze.
Iyo inochengetedza mishonga panguva yekucheka- Hapana munhu anoda kurasikirwa nemishumo yavakashandira panguva yekucheka. Zvakaita Anadrol ndezvokuti zvinorwisa uye zvinoparadza masero omuviri masimba pasina kuparadza mishonga. Pane imwe nguva mafuta akapoteredza misumbu yakaputsika mishonga iye zvino yava kutarisa uye yakaonda. Nokuda kwekutarisa kwakaoma uye kwakanyanya Oxymetholone (Anadrol) 434-07-1.
Inokurudzira chido-Umugadziri wezvinhu anodikanwa kutora marori akawanda kuitira kuti muviri uwane masimba. Asi dambudziko rinouya apo munhu anotambura nekushaya chido chokutora mumakirori anodiwa. Oxymetholone ichakupa chido chekudya chakakwana chichaita kuti marori ako adye.
Inowedzera simba rekudzivirira- Anadrol inowedzera simba rako, rubatsiro runonyanya kukosha kudivi.
Zvinonyanya kutungamirira kune kuwedzera kwemuviri wemuviri- Oxymetholone inovandudza simba uye kana uri kutsvaga chimwe chinhu chichakubatsira kuti uwedzere huwandu uye hufudzi zvakanyanya iwe uri pachena munzira yakarurama. Zvichienderana nekuongororwa kwayo, ichi chirwere chinonzi chichiita kuti zvive nesimba rokumhanya pamusoro pekushandisa kwayo.
Zvinoshamisa kukurudzira musimba kukura- Vakawanda vanogadzira muviri vakaedza kuwanisa musisi kuti vasawane. Na Oxymetholone, haufaniri kuedza zvakaoma zvikuru. Kana uchingotanga kubuda mapiritsi aya, unogona kutarisira kuwana mishonga mushure memwedzi miviri. Chikamu chakanakisisa pamusoro pekushandisa izvi zvinodhaka ndechokuti haufaniri kumirira kwenguva yakareba kuti utange kuona kuti misumbu yako iri kukura. Mukati yevhiki yechipiri, iwe uchakwanisa kuona kumwe kusiyana.
Inokurumidza kuita zvino inowedzera mhinduro- Kana iwe usina kunaka pakutsungirira, iwe uchaziva kuti steroid iyi inopa zvikwereti zvakakwana munguva shoma. Ichakuvhura iwe uri muviri wako uchikubvumira kuti uite zvinangwa zvemuviri wako mumasvondo masere masere.
Inovandudza kushanda-Zvimwe pane kuvaka masumbu, Anadrol inopa imwe kukurudzira kukuru mukushanda. Somugumisiro, vadzidzisi vezvemuviri nevatambi vanogona kudzoka nokukurumidza kubva pane zvidzidzo zvekudzidzisa. Somugumisiro, vanogona kudzidzisa zvakanyanya uye kunyanya kakawanda.
Inobatsira mukurema- Kana iwe uchida kuita kuti muviri wako uone wakazara uye unofadza zvikuru iwe unofanira kufunga kushandisa Oxymetholone yehuwandu hunodiwa. Vanhu vazhinji vakashandisa iyo vakazivisa kuti yakavabatsira kuti vawane kukurumidza kuwedzera kuwedzera. Kuisa pa 20-30 mapaundi mukati memasvondo e4-6 hakusi kuseka, uye Anadrol akaratidza kuti anounza kunyange kupfuura izvo.
Inowedzera simba- Kukwanisa kuvhara paunenge uchiita basa kana kuti maitiro ekudzidzira kwechinguva chakawedzerwa chimwe chinhu chimwe nechimwe chimiro chemiviri chinoda. Chimwe cheOxymetholone chinokonzera kuti inomutsa simba rako rinokubvumira kudzidzisa muviri wako chero bedzi iwe uchida kutungamira kusvika pakupedzisira masvingo kuvaka.
Zvinoderedza marwadzo pamwe chete- Iyo kurwadziwa kunogona kuita kuti munhu avenge achivenga kushanda uye kunyange zvazvo Anadrol achizivikanwa kuti aumbe musimba uye simba, inoshandawo basa rinokosha mukupa majoini mafungiro anogadziriswa achidaro achideredza marwadzo akabatanidzwa. Iwe hauchazovi nechikonzero chekusasimudza zvisikwa sezvaunowanzoita sezvaunoda.
Oxymetholone (Anadrol) muyero
Kungotora Anadrol 50 hazvirevi kuti iwe unoguma zvakanaka. Iwe unoda kutora dheji yakakodzera kana iwe uchida kuona mitezo yakanaka. Zvimwe pane izvozvo, kutora mhosho yakarurama inokudzivirira kubva pane zvingava nemigumisiro iyo inobatanidza nokutora chisina kunaka Anadrol dosage. Kunyange zvakadaro, chirwere cheAnadrol chinosiyana kubva kune mumwe kune mumwe zvichienderana nezvinangwa zvemunhu.
Sezvinopesana nedzimwe mishonga inowedzera iyo iyo yakawanda yaunotora kuchinja pamatanho akasiyana-siyana emhirizhonga, Anadrol ine muyero wakaenzana we50mg zuva rega rega. Vatangi vekutanga vanogona kutanga nehana yakaderera se25mg-50mg, uye kana miviri yavo inogona kutsungirira mishonga, vanogona kuwedzera kuwedzerwa.
Vanhu vazhinji vanowedzera kudarika pamusoro pemishonga iyi yekufunga kuti inowedzera chido chavo kunyanya. Zvisinei, izvi hazvisizvo naAnadrol. Inoshanda pamusana pokuti inodzivisa kudya kwomunhu kamwe kwakatorwa kudarika. Uyezve, zvinokurudzirwa kuti munhu haatore mishonga yakakura yechirwere ichi nokuti inogona kutungamirira kumagumisiro akaipa.
Kana iwe uchida kuwedzera zvishoma, unogona kuwedzera muyero wako ku100mgs. Izvo zvakadaro zvinorayirwa kuti iwe unoita izvi bedzi kana muviri wako unogona kuzvitsungirira. Usaita chikanganiso chepfuura 150mgs nokuti izvi hazvingave zvakanaka kune chiropa chako. Izvo zvinogona kutungamirira kukuderedza zvido zvako, uye izvi zvinoreva kuti iwe haugone kudya sezvawaiita kuti udzivise kukura kwako.
Oxymetholone (Anadrol) cycle uye stack
Oxymetholone (Anadrol) purogiramu
Vakawanda vanogadzira muviri vanosarudza kushandiswa kweAnadrol mumagariro avo nechinangwa chekusimudzira kushanda kwavo. Heano mamwe emakakatanwa ayo vazhinji vavo vanoda;
1. Kune vanotanga
Zvinotora vhiki gumi nemaviri.
Vhiki 1 kusvika kwevhiki 6- Tora 25-50mg yeAnadrol zuva nezuva
Vhiki 1 kusvika kwevhiki 12- Tora 300-500mg ye Testosterone Enanthate vhiki.
Iyi ndeimwe yekutanga-inoshamwaridzana neAnadrol maitiro apo testosterone iri chikamu chayo uye pamushonga wakakura unozoita zvinodiwa anabolic effect. Kune rumwe rutivi, Anadrol ari pamusana wekuti munhu anotanga anorayirwa kutora.
Paunenge uri munharaunda iyi, zvinokurudzirwa kuti iwe utore SERM yakafanana neNolvadex kana chero aromatase inhibitor nekuda kwechimiro chestestrogenic icho chikwata ichi chine. Kune chero munhu anotanga anoda kuwedzera, iyi ndiyo yakanakisisa Anadrol mhepo yekuenda nayo.
2. Kune vashandisi vari pakati
Week1 kusvika kwevhiki 6- Tora 50mg yeAnadrol zuva nezuva.
Week1 kusvika kwevhiki 12- Tora 400mg yeDeca Durabolin (Nandrolone Decanoate) vhiki nevhiki.
Uyewo, tora 100mg ye Testosterone Enanthate vhiki nevhiki.
Sezvawaona, pane zvishoma zvichishandurwa mumutambo uyu zvichifananidzwa nekutanga. Izvi zvinenge zvisati zvaitika kune vanabolic, uye chinangwa chikuru cheizvi ndeche kuderedza kuwedzera kwebasa reestrogenic mukati mekufamba kwenguva pavanoshandisa mishonga yakafanana neAnadrol.
Deca Durabolin inowanikwa mubasa iri apo mumwe anogumisa kushandiswa kweAnadrol nokuti inhengo yevanabolic. Munharaunda iyi yeAnadrol, kuyerwa kwaro kwave kwakaderedzwa kubva kune huwandu hwe 50-100 mg zuva nezuva kutora muto we 50 pazuva. Izvi ndezvokuti chirwere ichi chinonyanya anabolic. Izvo, saka, haifaniri kuwedzera muyero weAnadrol. Kana kuwanda kana simba zvichiwana, muyero we50mg unopfuura zvakakwana kuti muve nemushandisi wepakati.
Zvinotora vhiki masere.
Vhiki 1to vhiki 8- 100mg yeAnadrol pazuva
Tora 25mg yeTesttosterone Propionate zuva rega rega pa100mg vhiki nevhiki
Tora 100mg Trenbolone Acetate zuva rimwe nerimwe pane rimwe 400mg vhiki nevhiki.
Kusiyana kwemupakati uyu wakareba nevamwe ndekuti inotora nguva shoma. Inosanganisirawo steroids iyo shoma shoma seTrenbolone Acetate uye Testosterone Propionate. Kushandiswa kwaro kunogumira kumavhiki masere, uye hazvibvumirwi kuishandisa kwenguva yakareba zvikuru zvichienderana nepamusoro dhiyo ye100mg pazuva.
Chikamu chakanakisisa pamusoro pehupamhi yeAnadrol dambudziko ndechokuti inokwanisa kupa simba rinoshamisa uye kubudirira kwekubvumira kunyanya kana yakabatanidzwa neTrenbolone Acetate.
Izvi zvinongorumbidzwa chete kune vashandi vepamusoro nokuti zvinogona kutungamirira kune munhu kuwana simba rakawandisa uye kukura saka zvichikonzera kukuvadza kune vamwe vashandisi vezinga.
Anadrol 50 inopa zvakakosha zvakasiyana-siyana sezvo iwe unogona kusarudza kuishandisa pachayo kana kuisunganidza pamwe chete nedzimwe steroid.
An Anodrol chete kufamba- Nekuita izvi, iwe unogona kunge wakawana zvibereko zvakanaka. Kunyange iwe ungasarudza kuvhara, zvakanaka kuti usarudze steroid iwe unoisa nayo pamwe nekudzivisa kuwedzera migumisiro yechirwere. Kana iwe unofarira kuvhara munzira yakachengeteka, ino ndiyo nzira dzaunogona kuita izvozvo;
Shandisai anabolics munyoro-Zvakanaka kuti iwe uzviise neine anabolic steroid dzakanaka seSARMS, Equipoise, Primobolan, uye Deca Durabolin.
Usaiisa pamwe ne androgenic steroids pamusorosoro wepamusoro-Paunenge uchitema steroid seTesttosterone kana Trenbolone, unofanirwa kurega kutora chirwere cheAnadrol chinopfuura 200mg.
Dzivisa kuigadzirisa neDHT- Kuvhara Anadrol nemaSteroid akadai sa Masteron naWinstrol vanoita zvinokuvadza kupfuura kunaka. Iwe unogona kuwana zviwanikwa zvaunoda, asi migumisiro yechirwere inouya neyo isingagumiki. Mumamiriro ezvinhu apo vanhu vakaputirwa naWinstrol, paive nemashoko ekurasikirwa kwebvudzi rakanyanya.
Usazvidzivirira pamwe nezvimwe steroid zvinokonzera kukuvadza pachiropa-Dzivisa kuvhara nemuromo steroid nokuti inogona kukonzera zvinetso zveropa.
Usatora kwenguva refu-Nenguva yakawandisa yekugadzirisa kuva masvondo mana, zvakanaka kuti uone kuti nguva yakareba yekushandiswa uye yakanyanya kuwedzerwa uwandu hwaunotora, zvinowanzova nemigumisiro yakaoma.
Saka iwe unofanirwa kutora pfupa yeOxymetholone nekuchenjera usingashandisi chero yemishonga.
Nemhaka yokuti Anadrol ndeimwe yemasimba anebolic steroid mumushamba, zvakanaka kuti uve nehutano hwakanaka hwekugadzirisa hutachiona hunoiswa panzvimbo. Chinangwa cheizvi ndechekutendera kuti uchengete zvaunowana. Hazvingave zvakanaka kurasikirwa nezvinhu zvose zvawakapedza mushure mekufamba kwenguva, ingadai here? Uyezve, PCT inobatsira iwe kuti usadzivisa migumisiro yechirwere inogona kukonzerwa nekudzingwa kweTesttosterone.
Sezvo Anadrol ane hafu yenguva pfupi yeupenyu uye iri shoma shoma, unofanira kutanga PCT yako mazuva matatu mushure mekutora chiremba chako chekupedzisira kana iwe uchichiishandisa chete. Kana iwe wakanga uine stacking nayo chero steroid iyo inotora nguva yakareba, unofanira kutanga PCT 14-18 mazuva mushure mekutora chiro chako chokupedzisira. Nolvadex kana Clomid ichakubatsira kickstart yako yekugadzirwa kwe testosterone mumuviri wako. Heino nzira yokutora mishonga;
Mavhiki Nolvadex / zuva Clomid pazuva
Oxymetholone (Anadrol) madhara
The Anadrol migumisiro dzakanaka, asi dzimwe nguva dzinogona kuuya nezvisingafadzi migumisiro. Mazhinji emigumisiro yeAnadrol inogadzirika uye ichapfuura kana wapedza kuatora.
Tsvaga chiremba kunyatsotarisa kana iwe uchinge uwana chero chezviratidzo izvi nekuda kwehutano hunoita;
Kuchema kwehuro, rurimi, miromo, uye chiso
Anadrol nemigumisiro inokonzerwa nekushandiswa kwayo kwenguva yakareba makumbo akazadzwa neropa mumutsara kana chiropa. Izvo zvinogonawo kukonzera matumbo eropa.
Dana chiremba kana iwe uine chimwe cheizvi;
Jaundice-kupenya kwemaziso uye ganda.
Kukudzwa kwetsoka nemaoko
Kuvhuvhuta kunorwadza mumazamu
Kusveta (gumini inopa ropa kana kuputika mumhino) kana kunyorera nyore, kubuda pasina kumira
Chirongwa chakashandurwa pakuita zvepabonde, kuderedza chiyero chemuviri unobudiswa pamusana pekudzivirira, kusangana nehupombwe nekushaya simba
Kunzwa marwadzo pamutambo pawakasimuka
Zvakaoma kana zvinorwadza kukonzera
Vakadzi vari kushandisa Oxymetholone vanogona kusimbisa masimba uye saka vanofanira kumira kushandiswa kwaro kana vachinge vaitika kana kutsvaga mazano kune chiremba. Zvinosanganisira;
Chido chakakunda kana chichiwedzera mune zvepabonde
Kuchinja kune nguva yekuenda kumwedzi
Kuwedzera bvudzi romukati
Kukura kwebvudzi pachipfuva
Inzwi rakadzika kana rinopenya
Izvozvo zvinowanzova nemigumisiro inowanikwa kune vose varume nemadzimai dzinosanganisira;
Matambudziko okurara (kusuruvara)
Kunzwa kufara kana kusazorora
Muchembere kurira uye unyoro (mune varume nevakadzi)
IOxymetholone (Anadrol) yakachengeteka kutora here?
Is Anadrol yakachengeteka here? Mubvunzo uyu unotora pfungwa yevanhu vakawanda vanofarira kutora ichi chirwere. Anadrol 50 yakachengeteka kana yakatorwa zvakanaka, asi inogona kunge isiri iyo iwe uri kutarisana nechimwe chezviitiko zvinotevera;
Kana iwe uri pane chero ropa rinopfurikidza nemishonga yakafanana naJantoven, Coumadin, Warfarin
Kudzorera kana kuva neropa rekuvhara ropa
High cholesterol kana triglycerides
Chirwere chemwoyo, congestive moyo kusakundikana
Chiropa kana chirwere chetsvo
Kenza yemukomana yemakumbo ine yakawanda yekasiamu muropa
Kenza yemukomana yemazamu
Anadrol haisi yakachengeteka kwauri kana iwe uri nepamuviri. Inogona kukuvadza mwana wako asati aberekwa uye kunyange kutungamirira kumatambudziko ekuberekwa. Kana ukatora pamuviri uchiri kushandisa chirwere ichi, ona chiremba pakarepo. Iwe unopawo zano rokuti ushandise nzira inobatsira yekudzivirira kuberekwa paunenge uchishandisa ichi chirwere.
Iyi mishonga inogona kuchinja kubereka kwevakadzi nevakadzi uye saka, inofanira kutorwa nechinguva yakawanda.
Dzidzo pamusoro pekunge inopfuudzwa kumuchecherera mwana kuburikidza nemukaka wechipfuva haisati yaitwa, uye hazvizivikanwe kana zvingakonzera kukuvadza. Paunenge uchishandisa mishonga iyi usarega kunyorova mwana wako muduku.
Vanhu vari pasi pemakore gumi namasere emakore havafaniri kushandisa mishonga iyi nekuti inogona kuchinja kukura kwemapfupa avo.
tenga Anadrol kubva panzvimbo yedu yepaiti uye kuitora. Heino nzira yaunorayira kubva kwatiri;
Iwe unogona kutitumira isu kuburikidza ne email yedu, mumiririri webasa rekutengesa, Skype yepaIndaneti kana kuburikidza ne email yedu yekuongorora hurongwa.
Kuti tibatsire kukushandira zviri nani, tipei ruzivo rwese runodikanwa maererano nehutano, kureva, kero yako nehuwandu hwaunoda kutenga.
Mumiririri wevashandi vedu vanogona kudzokera kwamuri uye vanokupai nzira yekuendesa, inofungidzirwa zuva rekuuya (ETA), nhamba yekutsvakurudza, zvinyorwa uye mazwi ekubhadhara akakodzera.
Kana wakambobhadhara yako, zvigadzirwa zvinotumirwa kwauri mukati maawa gumi nemaviri anotevera (Izvi ndezvokuti chero chirongwa chinopfuura gumi kilogram).
IOxymetholone (Anadrol) haina kutenderwa here?
Nheyo yekushandisa, kutengesa nekutenga Oxymetholone inopararira kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe nyika. Somuenzaniso, muUnited States, Canada, uye US kushandiswa kwechirwere ichi kunobvumirwa, asi kushambadzirwa kwemutemo kusina kutenderwa. Kuti urege kuzviwana uri mumatambudziko, tarisa kana nyika yako ichibvumiraAnadrol kushandiswa.
Munyika dzakawanda, iwe unogona kungozviwana kuburikidza nemuongorori asi kuti urege kutambudza iwe unogona kuitora paIndaneti.
Ndingawane kupi Oxymetholone (Anadrol)?
Sezvaunozvipira iwe mukusimbisa muviri, iwe unogona kuziva kuti chiyero chekukura kwemisungo yako haisi kugutsa. Kunyangwe mushure mekuita zvose zvamunogona, munogona kugumburwa kuona kuti hamufi kwaunoda kuva. Pane dzimwe nguva, unogona kuona kuti pane mafuta mazhinji anovaka mumuviri wako. Mafuta akadaro achavanza misungo yako, uye iwe unogona kuzviwana uchitarisa zvose fump.
Kana uri mumamiriro ezvinhu akadaro, usanetseka uchifunga kuti chii chinotevera. Mazuva pawakanga uchifanira kukumbira munhu wese muimba yekurovedza kuitira nzira yekuvaka masimba ako akareba kwenguva refu. Mazuva ano, iwe unofamba paIndaneti, uye unogona kuwana nzvimbo dzose dzinotengesa steroid online. Asi iwe unoziva sei nzvimbo yakanakisisa yekuzvitenga kubva?
Kungofanana nesteroid chero ipi zvayo yaunotenga, zvakakosha kuti utenge Anadrol 50 kubva kune chakavimbika. Ikoko iwe unogona kuva nechokwadi chokuti uri kuenda kune imwe yenhamba yepamusoro yeOxymetholone nehutano. Newetaneti ine vazhinji vanotengesa muzita revatengesi, unogona kuwira kune nzvimbo dzinotengesa steroid yakaipa kana yakasvibiswa. Vamwe vanabolic steroid vangave vasina hunovimbiso hwechokwadi, uye vanogona kuguma vachikanganisa muviri wako zvisina kunaka. Iyo chaiyo Oxymetholone isati yasvika uye pashure payo mhinduro yakafanana nemamwe nyika pasi, uye iyo inofanira kuva iyo apo iwe watanga kushandisa steroid.
Munzvimbo yedu yeAASraw.com, iwe uchakwanisa Anadrol yakachena uye yakachena. Kodzero yedu ye oxymetholone iine pocket-inobatsira, uye nekutenderera kwayo, unovimbiswa yekuwana zvibereko zvakanaka zveAnadrol uye zvishoma zvishoma Anadrol madhara. Raira kubva kwatiri nhasi uye uchinje muviri wako kune zvauri kuda kuti zvive.
Saartok T, Dahlberg E, Gustafsson JA (1984). "Kuwirirana kunobatanidza hukama hwevanabolic-androgenic steroid: kuenzanisa kusungirirwa kune-androgen receptors mumakumbo emakumbo uye mu prostate, pamwe chete nehutachiona-binding globulin". Endocrinology. 114(6): 2100-6.
Pavlatos AM, Fultz O, Monberg MJ, Vootkur A, Pharmd (2001). "Ongororo ye oxymetholone: ​​17alpha-alkylated anabolic-androgenic steroid". Clin Ther. 23(6): 789-801.
Zderic, John A .; Carpio, Humberto; Ringold, HJ (January 1959). "Steroids. CVI. Synthesis ya 7β-Methyl Hormone Analogs ". Nyaya yeAmerican Chemical Society. 81(2): 432-436.
Zvose Zvaunoda Kuti Uzive Ne Dianabol Powder For Sale Top 15 Winstrol Zvipo Unoda Kuziva Usati Watenga Winstrol Online